(Hadhwanaagnews) Wednesday, March 14, 2018 08:13:52
Maxamed Cabdillaahi (Farmaajo) iyo Xasan Cali Kheyre, marka ay hadlayaan, inay been qaawan, oo afka ay soo marin kari laayihiin
Dhinaca Somaliland, warkeedu wa’u cadyahay, oo si saraaxad leh, aya’ay Somaliya iyo caalamka kale’ba ay u gaadhsiiyeen; oo ay ugu sharxeen. Laakiin xukuumadda iyo golayaasha Somaliya, oo iyagu dhexdooda isku jabhadeynaya, oo aan isku hadaf ahayn, oo
aan isku mowqif ahayn, ayaa iyagu wax aan been iyo khuraafaad ahayn, aan la shir imaneynin. Huu’haa mooyaan’e, in aanu hadal run u dhow’i, ama dood u eeg’i, ama gar iyo garowshiiyo leh’i, in aanu ka soo naasa’caddeyn, aya’ay u muuqdaan.
Maxamed Cabdillaahi (Farmaajo) iyo Xasan Cali Kheyre, marka ay hadlayaan, inay been qaawan, oo afka ay soo marin kari laayihiin, inay sheegiddeeda isku qasbayaan, ayaa wajiyadooda laga dheehan karayaa, oo cidna aan ka qarsooneyn. Waxa labadooda’ba ka go’an, inay bulshada mashquuliyaan, oo ay jaha’wareeriyaan, oo ay iska sii jeediyaan. Ujeeddadoodu’na, waa si ay waqtiga ugu dheereystaan, oo ugu maal urursadaan; oo ugu weel buuxsadaan.